I-FIFA ifuna ukusingatha iNdebe yoMhlaba ezokwenzeka njalo ngemuva kweminyaka emibili | Scrolla Izindaba
I-FIFA ifuna ukusingatha iNdebe yoMhlaba ezokwenzeka njalo ngemuva kweminyaka emibili
Uma imizamo ye-FIFA yokubamba indebe yomhlaba yebhola likanobhutshuzwayo njalo ngemuva kweminyaka emibili iphumelela, kuzosho ukusimama okukhulu ngokwezimali kwi-FIFA, kodwa kungaba nomthelela omubi kumaligi asekhaya emhlabeni jikelele.
Ngokombiko ohlanganiswe yi-KPMG kanye ne-FTI’s Delta Partners, ukulahlekelwa imali engenayo kungase kufinyelele kwimali eyizigidigidi ezi-142 zamarandi wamalungelo kamabonakude kanye nezivumelwano zezentengiselwano ngonyaka.
Lo mbiko uphinde wathi imidlalo yendebe yomhlaba ebanjwa kabili ngonyaka ngeke igcine ngokudala imali engenayo kuphela, kodwa izophoqa amaligi asekhaya emhlabeni wonke ukuthi ehlise isibalo samaqembu kanye nokudlulela emidlalweni yaphakathi nesonto esikhundleni semidlalo yangempelasonto.
Umbiko wengeze ngokuthi ukubukwa kwamaligi asekhaya kuzoba nethonya elikhulu, okuholela ekulahlekelweni kwenzuzo emaqenjini aqhudelana kumaligi awo.
Amaligi asuka eMelika, e-Mexico, e-Japan, eNingizimu Afrika nase-Europe abambe iqhaza kulolu cwaningo oluveze ukuthi noma ngabe i-FIFA ingakhetha ukulungisa okuncane okuzophazamisa imidlalo yendebe yomhlaba, kodwa isazodla izigidigidi zamaligi minyaka yonke.
Amaqembu azolahlekelwa cishe izigidigidi ezi-18 zamarandi ngonyaka ngenxa nje yokuncipha kwesidingo sikamabonakude, enye iyizigidigidi ezi-30 zamarandi ngenxa yesidingo sokusebenzisa ikhalenda elifushane kanye nokulahlekelwa okulinganiselwa kwimali eyizigidigidi ezi-16 zamarandi ngenxa yemidlalo edlalwa phakathi nesonto nakwimpelasonto.
UFrançois Godard, ongumhlaziyi we-Enders Analysis, uthe ukusingatha indebe yomhlaba njalo ngemuva kweminyaka emibili kuzodala umonakalo omkhulu futhi ohlala isikhathi eside.
“Njengoba kunendebe yomhlaba njalo ngemuva kweminyaka emibili futhi imidlalo kufanele isuswe ngempelasonto iye phakathi nesonto kanye nesizini yonke emfushane, abanye abadlali bangase bangatholakali ngesinye isikhathi. Kwenza ube buthaka umkhiqizo wabo, ” etshela abe-Reuters.
UMengameli we-FIFA, uGianni Infantino, ohlongoze ukuthi umcimbi oba njalo ngemuva kweminyaka emine udlalwe njalo ngemuva kweminyaka emibili, lowo mbiko uthole ukugxekwa okukhulu lapho izinhlangothi eziningana zamazwe ngamazwe nezinhlangano ezisabisa ngokuyiduba indebe yomhlaba uma ushintsho lwenziwa.